Vega Travel and Tour, 155/20 Soi 11/1, Sukhumvit Road Near Swiss Park Hotel Klontoei Bangkok 10110, THAILAND, Bangkok (2021)
หน้าหลัก > ประเทศไทย > Bangkok > สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว > Vega Travel and Tour
88 ซอย สุขุมวิท 19 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110, Klong Toey
Let’s celebrate our holiday together where the place of Myanmar most beautiful and precious paradise Island called Saung Gaut.
ပတ္တမြားင​မောက်​က​တော့ အဂ်​လိပ်​ယူသွား ​ပီး၊ ​စောင်း​ကောက်​ကျွန်းကတော့မြန်​မာနိုင်​ငံထဲမှာရှိတယ်​။ ​တောင်​ဖက်​အစွန်းဆုံးကျ​နေတဲ့ မြိတ်​ကျွန်းစု ထဲကထူးဆန်းတဲ့ ကန့်​လန့်​ကျွန်း တမည်​​ခေါ် ကျီးအာ ကျွန်း သို့မဟုတ်​ သမိုင်းရဲ့အရှင်​သခင်​စောင်း​ကောက်​ကျွန်း က ရှားပါးလှပ လွန်းတဲ့နှစ်​ဖက်​လှသဲဖြူကမ်း​ခြေမှာ ​မော်​လဒိုက်​​ရေပြင်​ရှုးံ​လောက်​​အောင်​ ကြည်​လင်​ပါတယ်​ ၊ သဲဖြူကမ်း​ခြေထိ သစ်​ပင်​ကြီးရိပ်​​တွေကျ​နေ​တော့ အလွန်​ရှားပါးသဘာဝသစ်​​တောမြန်​မာပြည်​မှာရှိ​နေတယ်​ဆိုတာ ကမ္ဘာကိုကြွားချင်​လိုက်​​သေးတယ်​ ။ ဝါသနာတူခရီးသွားလုပ်​ငန်းလုပ်​ကိုင်​သူ​တွေစု​ပေါင်းလုပ်​ထားပီး Ideas ​ကောင်း​တွေက တပြားမှမ​လျှော့နိုင်​​အောင်​ပါဘဲ ။ သဘာဝအလှ အပြည့်​မန်​ကိုတင်​ ပြီး အ​ကောင်းစားအဆင့့်​မြင့်​နားခိုစရာ ၊ ​ခေတ်​မီသန့်​စင်​ခန်းလုံလုံ​လောက်​​လောက်​ နဲ့​ရေချိုအလျှံပယ်​ ချိုးလို့ရ​အောင်​စီစဉ်​ချက်​ ၉ ​အောက်​မကျဘူး.။ စားစရာလား ပင်​လယ်​စာ​ပေါ့၊ ထိုင်းနဲ့စလုံလူမျိုးဟင်းလျာ​တွေအဝစားသွား၊ ကျွန်းအနီးနားက ​ရေ​အောက်​ကမ္ဘာကြည့်​ဖို့ပြင်​လာခဲ့၊ဘယ်​လိုဘဲလာလာ ​ကော့​သောင်းမြို့မ တံတားမှာဆုံမယ်​
​ရေကူးဝတ်​စုံတခါတည်းယူခဲ့၊ ​ရေငုတ်​ပစ္စည်း​တွေ က​လှေ​ပေါ်မှာစီစဉ်​ထားတယ်​၊ ​ရေမကူးတတ်​တဲ့သူ​တွေတွက်​သီးသန့်​ဂိုက်​ကိုကို ၊ မမ ​တွေလိုက်​​ပို့​ပေးမယ်​ ၊သမိုင်းတခုနဲ့​ရေ​အောက်​​အလှကမ္ဘာတခုသွားဖို့ ​စောင်း​ကောက်​ကျွန်း ကဖိတ်​​ခေါ်ပါတယ်​၊ စိတ်​ဖိစီးမှု့​တွေ၊အပူပင်​​တွေကင်းရှင်းဖို့ ​စောင်း​ကောက်​ကျွန်းကတာဝန်​ယူ​ပေး​နေပါတယ်​၊ ​ငွေကုန်​ရတာတန်​တယ်​ ကိုယ့်​နိုင်​ငံတိုးတက်​ကာကွယ်​ပီးသားဖြစ်​မယ်​၊ မိသားစုအ​ပျော်​ကားနဲ့​​ကော့​​သောင်း​မောင်းလာရင်​လည်းရတယ်​ ၊ ​လေယာဉ်​နဲ့ပိုမြန်​တယ်​ ၊ ထိုင်းဖက်​လာလည်းကြို/ပို့စီစဉ်​​ပေးမယ်​၊ speed boat နဲ့​ရော ပြည်​တွင်းဖြစ်​ သစ်​သား​လှေပါ ကြိုက်​တာစီးလို့ရ​အောင်​စီစဉ်​ထား​ပေးတယ်​ ၊ ညအိပ်​မယ်​ဆိုရင်​ အထူးဆန်း​လေးဖြစ်​​အောင်​ ရွက်​ဖျင်​တဲကအဆင့်​မြင့်​လုပ်​ထား​တော့ အဲ သဘာဝဟိုတယ်​ခန်း​ပေါ့၊ က​လေးသိတ်​ငယ်​ရင်​အဆင်​မ​ပြေဘူး၊ သက်​ကြီးဆိုသက်​​တောင့်သက်​သာ​ညအိပ်​ရင်​ပို​ကောင်းတယ်​ လူငယ်​​တွေက​တော့ High စရာ​တွေများလွန်းလို့၊ အတွဲဆို Hide စရာများတယ်​ private beach နဲ့ private group စီစဉ်​​ပေးတယ်​ ၊ ကြို​ပြောရင်​ပြည့်​စုံ​စေရမယ်​ စီးစရာ ကနူး​လှေ​တွေထား​ပေးထားတယ်​ ကျွန်း​သေး​လေးကိုပတ်​​လှော်​ရင်​ မိနစ်၄၀ကြာမယ်​ အထူးဆန်း​တွေ​တွေ့ဖို့ပြင်​ထား၊ နှစ်​တ​ထောင်​သစ်​ပါးပျဉ်းက လူတရပ်​ထက်​မြငိ့တယ်​ထိုင်း​တွေ​ပြော​တော့ ကိုးကွယ်​ရင်​ချမ်းသာတယ်​တဲ့ ယုံလိုက်​ပါ့မယ်​၊ လာရင်​​ရောက်​​အောင်​​တော့သွား၊ အနီးဆုံးက အသဲပုံကျွန်း ကိုယ့့်​အသဲဘာပုံလဲကြည့်​ခဲ့ကြ​ ရေ​တော့ကူးရမယ်​၊ ပန်းကျွန်း ၊ ဇာဒက်​ကြီးကျွန်​ (ကျားဟိန်း​အော်​) နဲ့တခြားလည်​စရာ ​ရေငုတ်​ကြည့်​မည့်​​နေရာ​တွေ​ရောက်​ပါမယ်​၊ ပုံတချို့တင်​ထား​ပေးတယ်​ တခြားပုံ​တွေလည်းထပ်​တင်​​ပေးထားမယ်​ စိတ်​ကူးနဲ့အရင်​​ရောက်​ထားနှင့်​​တော့၊ ဆက်​သွယ်​ရမည့်​လိပ်​စာ​တွေတင်​ထား​ပေးမယ်​၊ emailး[email protected] ,[email protected]
Lineး+66816596298
Photos from Vega Travel and Tour's post
စင်္ကာပူကို ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ လာရောက်မယ့်သူတွေအတွက် ၀င်ကြေးလက်မှတ် တွေသက်သက်လဲရောင်းပေးပါတယ်။ အချိန်မရွေးဆက်သွယ်ခေါ်လိုက်ပါ။
ရုံးဖုံး - ၆၃၃၆၆၁၅၂
မိုဗိုင်း/ ဗိုင်ဗာ/ what'sapp - +၆၅၉၁၂၈၀၃၈၅
Mu Mu Myat Kyaw
"Vega Yangon office"
Asia Plaza Hotel Ground Floor No 20/27 Bogyoke Road, Kyaukrada Tsp, Yangon Ph: 01-391371 , 09961884562-3
ဆလုံစာကို ဘယ်သူသိလဲဟေး........ သိရင်ပြောပြကြပါဦး။
[10/24/16] ဘန်ကောက်သို့ ကိုယ်ပိုင်အစီစဉ်ဖြင့်လာရောက်မည့် မိတ်ဆွေများအတွက်လဲ ၀င်းကြေးလက်မှတ်များနှင့် အကြိုပို့ ပါပြီးသား Tour များလဲရှိပါတယ်။
Tour to SAFARI WORLD and MARINE PARK လက်မှတ်နှင့်နေ့လည်စာ ကြိုပို့ ပါဝင်ပြီး-
2-3 Persons - B1,150 per person
4-7 Persons - B1,100 per person
8-14 Person - B1,000 per person
Tour to DREAM WORLD လက်မှတ်နှင့်နေ့လည်စာ ကြိုပို့ ပါဝင်ပြီး -
B990 per person - 2-4 Person - Pickup - Drop, Unlimited Rides, Buffet Lunch
B950 per person - 5-7 - Pickup - Drop, Unlimited Rides, Buffet Lunch
B850 per person - 8-12 Person - Pickup - Drop, Unlimited Rides, Buffet Lunch
Tour to SIAM PARK CITY -လက်မှတ်နှင့်နေ့လည်စာ ကြိုပို့ ပါဝင်ပြီး -
3 Persons is B1100 per person
4-6 Persons - B1000 per person
7-14 Persons - B900 per person
Tour to CHAOPHRAYA PRINCESS DINNER CRUISE - International buffet and Seafood while cruising along the River of the Kings -
1-4 Persons - B1,150 per person
5-14 Persons - B1,100 per person
လက်မှတ်နှင့်ညစာ ကြိုပို့ ပါဝင်ပြီး
AYUTHAYA 1 Day Tour
2-5 Person = ฿1,400/Person
6-14 Person = ฿1,300/Person
Inclusive of entrance to Temples, Lunch & Transport
2-4 Person = ฿1,650/Person
5-9 Person = ฿1,250/Person
10-14 Person = ฿1000/Person
inclusive of Coral Island tour, Lunch & Transport
မှတ်ချက်။ ။ Tours အားလုံးကို ၂ရက်မှ ၃ရက်အတွင်းကြိုတင် book ပါရန်။
Vega Travels & Tours
Viber: : +959 970451500
မြဘုရားနှင့်​ ဘုရင့်​နန်း​တော်​ဝင်းကို နိုဝင်​ဘာလ ၁ရက်​နေ့မှစ၍ပုံမှန်​ပြန်​လည်​ဖွင့်​လှစ်​သွားမည်​ဖြစ်​​ကြောင်း နှင့်​ ဘုရားဖူးအားလုံး အနက်​​ရောင်​များဝတ်​လာပြီး နတ်​ရွာစံသွား​သောမဟာဂရုဏာရှင်​ထိုင်းဘုရင်​မင်းမြတ်​အားဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းမှတ်​ ဖြင့်​လာ​ရောက်​ဖူး​မျှော်​နိုင်​ပါ​ကြောင်း အသိ​ပေးလိုက်​ပါသည်​။
" Vega Travels & Tours မှ Get Romance ဆိုတဲ့ package "
ကဲ အားလုံးပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အသဲတစ်ခြမ်းနဲ့တူတူ အမှတ်တရနေ့ ဖြစ်တဲ့ Anniversary နေ့ ပထမဦးဆုံးစတွေ့တဲ့နေ့ , ချစ်သူတွေစဖြစ်တဲ့နေ့ အဲ့လိုတန်ဖိုးထားမမေ့နိုင်တဲ့ အမှတ်တရနေ့လေးတွေကို ပုံမှန်အတိုင်းဖြတ်သန်းဦးမှာလား ...
ခုမိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ စုံတွဲတွေ အတွက် သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်
မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အတွက်လည်း အရမ်းအဆင်ပြေ ရင်ခုန်စရာပဲလေ။
ကဲ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်တွေရိုးလာ ပြီး သိပ်ရင်ခုန်စရာမပေးနိုင်တော့ဘူးမလား
ခု ခရီးစဉ်လေးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက် ....
ရန်ကုန်ကနေ ဘန်ကောက်ရောက်ရောက်ချင်းပဲ Dream World ကိုတန်းသွားပြီး ရင်ခုန်စရာတွေ အစပြုကြမယ်... Roller Coaster , Tornado, Hurricane , Hunted House တွေနဲ့ ချစ်သူကို စရင်ခုန်ပေးကြည့်ပေါ့။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့အရုပ်လေးတွေ ပန်းအလှ တွေ နဲ့ လည်း တူတူအမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ တော့ လိုမယ်နော် ...။ ။
ကဲ Dinner Time .. ဘန်ကောက် ရဲ့ ကျောက်ဘုရားမြစ်ထဲ မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ သင်္ဘောစီးရင် Dinner စားရမှာဆိုတော့ ကြည်နူးမှုအတိုင်းတာ ..... ကိုယ့်ကိုတိုင်းကြ..။
ကဲ နောက်နေ့ ကန်ချနာဘူရီ သမိုင်းဝင်မြို့ ကိုသွားလည်မယ် ဘန်ကောက်ကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ ဦး။
ကန်ချနာဘူရီမှာ သေမင်းတမန် ရထားလမ်းအကြောင်းလေ့လာမယ် စိတ်ဝင်စား ဖို့အရမ်းကောင်းတယ် .။ ပြီးရင်တော့ သေမင်းတမန်ရထားလမ်းပေါ် ရထားစီးပြီး ကန်ချနာဘူရီရဲ့ River Kwai အလှကို ကြည့်မယ် ။ ဆင်စီးမယ် ... အတူတူ ။ River Kwai မှာ ရေအေးအေးလေးနဲ့ ဖောင် တစ်ပတ်စီးကြမယ်။ နေ့လည်စာကိုလည်း မြစ်နဘေးမှာပဲ အေးအေးချမ်းချမ်းစားကြတာပေါ့။
ညနေအပြန် ကို Asia Tique မှာ Dinner ပြန်စားမယ် နေရာကတော့ မိုက်လွန်းလို့ ဓာတ်ပုံတွေဆိုတာ Memory card ပါပြည့်လိမ့်မယ် ။
နောက်နေ့ မနက်မှာတော့ Shopping အမှတ်တရ၀ယ်ပြီး ပြန်ကြမယ်။
Vega Travels & Tours ရဲ့ Get Romance!
Tel: +951 391371 (Yangon office)
Tel: +662 2558393 (Bangkok office)
Tel: +65 63366152 (Singapore office)
" We always bring you the best "
Maldives3days2nights
ဘန်ကောက် ၄ည ၅ရက်ခရီး
✈️✈️ဘန်ကောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် ကုမ္မဏီ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုပါမည်။
ဟော်တယ်တွင် Check in ၀င်ပြီးနောက် နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီး မြဘုရားနှင့် ဘုရင့်နန်းတော်သို့ လည်ပတ်ဖူးမျှော်ပါမည်။ ညနေစာ သုံးဆောင်ပြီးမှ ဟော်တယ်တွင် ပြန်လည် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
✈️✈️ ဟော်တယ်တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီး Safari World သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ နေ့လည်စာကို Sarafri World တွင် သုံးဆောင်ကာလည်ပတ်ပြီး ညနေပိုင်းတွင် ပတ္တရားသို့ သွားကြမယ်။
ပတ္တရားည (Night life) ကို လမ်းလျှောက်ကြည့်ရှုပြီးမှ ဟော်တယ်တွင် ပြန်လည် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
🌴🌴 နံနက်စာကိုဟော်တယ်တွင် သုံးဆောင်ပြီးမှ သဲဖြူကျွန်း ( Coral Island) သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ နေ့လည့်စာကို ထိုကျွန်းတွင် ပင်လည်စာဖြင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံပြီးအမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ် နေ့ခင်းပိုင်းတွင် ပတ္တရား Noon Nooch ပန်းခြံများကို သွားရောက် လည်ပတ်ပါမည်။ ဆင်လိမ္မာ ပြပွဲများ၊ ထိုင်းရိုးရာအက များကြည့်ရှုမည်။ ညနေပိုင်းတွင် ဘန်ကောက်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာပါမည်။
🎯🎯ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး Dream World သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ နေ့လည်စာကို Dream World တွင် သုံးဆောင်ပြီး ညနေပိုင်းတွင် အယုဒ္ဒယမြို့ ဟောင်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ ထိုမြို့ တွင် ညနေစာသုံးဆောင်ကာ ဘန်ကောက်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာပါမည်။
🎭🎭 ဟော်တယ်တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ကိုယ်ပိုင် Shopping အချိန်ပေးပါမည်။ ညနေပိုင်းတွင် လေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
Bangkok Viber: +66815591883
Bangkok Office: +662 2558393
Yangon office: +95 1 391371
+66 2255 8393-4
Wanting an excellent taxi service for both Thailand/Bangkok/Pattaya moving around or sight seeing. Great English speaking man with new luxury car.
21charamnimit4Bangko Bangkoleam
LUCKY Travel Thailand
8/17 ซอยนาคนิวาส48 แยก 14-1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
Freedom Step Travel - Japan Halal Tour
รถรับจ้าง ขนของ ขนย้าย ศาลาย
33/47 Wall Street Tower 11th Floor, Surawongse Road
ทัวร์คนโสด ชอบเที่ยวคนเดียว แต่ไม่อยากเสียค่าพักเดี่ยว ต้อง Like! มีทัวร์ทั่วโลก หาเพื่อนแชร
39/9 Krungthep Kreetha Road, Thap Chang, Sapan Soong
Come with me and experience Travel like I do
300/76 โครงการพรีเมี่ยมเพลส 6
"เที่ยวสนุก ครบทุกไฮไลท์ไปกับ Hilight worldtour" T: 02-3791933 M: 081-1483928 Line: Hilight-worldtour ททท.เลขที่ 11/07075
360worldtour ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่
ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ยุโรป ทัวร์พม่า โทร.083-7199991